Ọgwụgwọ Ntugharị: Ezigbo Ndị Mmadụ, Ezigbo Akụkọ | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Ndụmọdụ na ọgwụgwọ na-arụ ọrụ n'ezie
Abia na ndi nwanyi abuo, ndi enyi nwoke gara aga na onye n’ebu agha banyere ihapu ndu ha mbu na otu esi “ntughari” Ogwu (inyeaka) ma obu enyemaka ndi ozuzu aturu. Guo ma obu ge nti banyere akuko banyere ndu ndi ozo. Andrew, Ruth, Steve, Andy, Emma, ​​Pete, Lyn, Dani, John, Robson, Marie na Irene.
Ọgwụgwọ Ntugharị: Ezigbo Ndị Mmadụ, Ezigbo Akụkọ.
Enweela nkwalite zuru ụwa ọnụ na nlebara anya na ndụmọdụ gbasara iwu maka mmasị nwoke na nwoke na nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ. Akpọrọla nke a "ọgwụgwọ mmekọ nwoke na nwoke". Ndabere nke aha a bụ na nwoke na nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya inwe mmekọahụ na-ekwupụta na ọ bụ usoro ebumpụta ụwa na-enweghị mgbanwe.
Ihe ndị bụ eziokwu bụ na ọ dịbeghị mgbe ọmụmụ sayensị na-egosi na nwoke na nwanyị inwe mmekọahụ ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya nke nwoke na nwanyị bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa. Enwere ọtụtụ iri afọ nke ndụmọdụ na-aga nke ọma maka ndị na-achọ isi na ụzọ ndị a. Ọtụtụ n'ime ndị a nwere ndụmọdụ (ntụgharị ọgwụgwọ) iji nwee ike ime ya.
Enweela ụfọdụ mmejọ nke ndị na-achọghị ndụ a. Ndị otu LGBT dị iche iche amabala na mkparị ndị a iji gosi na gọọmentị chọrọ ka ha machibidoro ndụmọdụ kpamkpam. ikike ha ruuru mmadụ.
Ndị a bụ akụkọ, na vidiyo ma dere ya site n'aka ndị mmadụ merela ka ndụ ha ka mma site na ịhapụ ụzọ ndụ LGBT.